Uhlela njani iividiyo kwiFotohop: indlela elula nekhawulezayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uhlela njani iividiyo kwiFotohop
UJudit Murcia | | Tutorials
Hlela iividiyo kwiFotohop? Ufunda ngokuchanekileyo, esi sixhobo asivumeli kuphela ukulungisa imifanekiso. Yibane Uluhlu lwezinto onokuzifumanisa.
Ukuba unemibono yendlela yokwenza i-GIF, kuya kuba lula kakhulu kuwe ukuba uqonde ukuba isebenza njani le khokelo. Ukuba akunjalo, ungakhathazeki ukuba kutheni kunjalo kulula ukuyiqonda.
1 Faka iileya kwi-Photoshop
2 Yenza ividiyo: inyathelo ngenyathelo
3 Uyenza njani iileya
4 Ixesha lexesha
5 Thumela ividiyo
Faka iileya kwi-Photoshop
Ukuqala, kubalulekile ukuqonda ukuba ukwenza ifayile ye- GIF Kufuneka sibe nomfanekiso wethu okanye umzekeliso zahlulwe zangamacandelo ahlukeneyoNgamanye amagama, isenzo ngasinye okanye into esifuna ukuyongeza kulungelelwaniso ngalunye kufuneka ibekwe kwiindawo ezahlukeneyo.
Yenza ividiyo: inyathelo ngenyathelo
Okokuqala, kufuneka siye kwimenyu ephambili kwaye silandele indlela elandelayo:
Ifestile- Umda wexesha
Iwindow entsha iya kuvela ezantsi, yitafile yokuhlela. Singasebenza kunye umda wexesha o njengoopopayi besakhelo. Le yokugqibela iya kuba lula kuwe ukuphatha, kwaye kulula kakhulu ukuyibona ngamehlo.
Njengamaleko, kufuneka yongeza isakhelo sendawo nganye. Ngebhokisi ekhethiweyo, siya kubonisa ukuba zeziphi iileya eziza kubonakala. Kufuneka vula okanye ucime ukubonakala (iliso).
Uyenza njani iileya
Enye indlela, ukuba kuya kufuneka wenze ubume bendawo nganye, kukusebenzisa i-Illustrator. Emva koko siya kongeza uluhlu ngalunye njengomfanekiso. Nawe unokwenjenjalo dibanisa imifanekiso yesitokhwe kunye nokwenziwa kwakho. Unethuba elihle, kufuneka nje cinga ezinye iindlela kwaye usebenzise uninzi lwezixhobo. Umbono olungileyo kukwenza, njengoko sibona kumfanekiso ongezantsi, impukane, ukufaka isicelo ngaphezulu kwemifanekiso yethu. Kuya kufuneka siyithumele ngaphandle ngefomathi yePNG ukunqanda ukuba nemvelaphi.
Ukufezekisa iziphumo ezifanelekileyo kufuneka sinikele ingqalelo kwizinto ezinje nge ixesha lokuhamba yendawo nganye. Ngokwesiqhelo sisekwe kwimizuzwana, sibonisa ubude bexesha elivela kwityolo elibekwe phantsi kwesikwere ngasinye. Ukuba sicofa, iifestile ziya kuboniswa ukubonisa ngqo imizuzwana. Singakunika ixesha eyahlukileyo kuyo yonke indawo.
Nathi sinako ukwenjenjalo chaza amaxesha esifuna ukuba isenzo siphindaphindwe. Eli nqaku liqheleke ngakumbi kwii-GIFs, nangona sinokuzisebenzisa ukuba sifuna ukuba ividiyo yethu idlale kwiluphu.
Ukuthumela ividiyo kwiFotohop, kufuneka silandele le ndlela ilandelayo:
Ifayile-Thumela ngaphandle-Tolika ividiyo ...
Xa iipropathi zesikrini zivela, kufuneka sikhethe ukhetho olwenziwe yifayile kuthi ifomathi .mp4.
Ngale ndlela, sinako yenza iividiyo ezinobuchule ngokwenene, Unxibelelwano kunye nokubonakalayo okuya kongeza ukudibanisa kwiprojekthi yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uhlela njani iividiyo kwiFotohop
Intengiso entsha yeCoca-Cola ungaphantse "uyive"
I-Paramount ithathe isigqibo sokuyila kwakhona i-Sonic ngaphambi kokufunyanwa kokugxekwa